मैले फागुन ८ मा लेखेको पहिलो खुल्ला पत्र पछि तपाइको हेडक्वाटरमा केही हलचल अवश्य आएको होला । तपाइको कपन दरवारमा समेत पहिलो पत्रले ५ रेक्टर जतिको भुकम्प त पक्कै गए होला। एउटा पुर्व कार्यकर्ताले लेखेको चिठीलाई तपाइले कसरी प्राप्त गर्नु भयो वा भएन, त्यो जानकारी मलाइ प्राप्त भएको छैन। मिडियामा तपाइको पहुच भएकोले प्राप्त गर्नुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । अहिले मैले दोश्रो खुल्ला पत्र लेख्न गैरहेको छु । अवश्य स्विकार गर्नुहुनेछ ।
कमरेड, तपाइको पार्टी भित्र गम्भीर प्रकारको अनुशासन विहिनताको अवस्था सृजना हुनुमा मुख्य गरेर तपाईं कै भुमिका प्रधान रहेको छ भन्ने विषयमा यो धर्तीमा दुई मत त आवश्यक छैन। तपाइको विगतको इतिहासलाई एक पटक हेर्ने हो भने त्यो छर्लङ्ग नै हुन्छ । विगतमा तपाईं पार्टीमा बहुमतमा भए अल्पमतलाई पेलेर जाने र अल्पमतमा भए सिद्धान्त र विचारको लागि पार्टी फुटाउने काम गर्नुभएको स्पष्ट छ । त्यसको निरन्तरता अहिलेको महाधिवेशनको दौरानमा नि दिनुभएको छ । अहिलेको स्थितिमा, त्यसले अन्ततः तपाइलाइ नै समाप्त गर्नेछ र तपाइको विगतप्रती पनि प्रश्न उठाउने छ ।
विगतमा पार्टी छोडेर जाने नेता/ कार्यकर्तालाई तपाइले अवसरवादी मात्र वताउनुभएको थिएन, तिनिहरुलाई पनि रअ ले परिचालन गरेको आरोप लगाउनुहुन्थ्यो । अहिले पनि तपाइको पार्टीलाई रअ ले फुटाउन खोजेको प्रचारप्रसार गर्दै हिड्नुभएको छ । तर हिजो र अहिले त्यसबारेमा तपाइले कुनै तथ्यहरु प्रस्तुतु गर्नुभएको छैन। एकोहोरो आरोप मात्र लगाउनुभएको छ । त्यो तपाइको राजनितिक दिवालियापन मात्रै हो । तथ्य बिना राजनिती उकालो लाग्दैन।
तपाइले मुख्य जोड यो छ कि पार्टीमा फरक मत राख्नेहरु पार्टी फुटाएर जान्छ्न वा पार्टी छोडेर जान्छन । त्यो नै तपाइको कच्चा विश्लेषण हो । त्यस प्रकारको विश्लेषण तपाइले पार्टीमा फुट पार्नको लागि नियोजित प्रकारले गराउनु भएको ग्राइनडिजान हो । एउटा कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरौं, कुनै पनि चिजको विकास वा विनासको लागि त्यसको आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण गौण हुन्छ । तपाइको पार्टी दिनदिनै मानी खिइएझै खिइदै जानू र विचारमा समेत स्खलन आउनु तपाइको पार्टी सन्चालनमा देखिएको आन्तरिक कमजोरी नै प्रधान हो । तपाइको कार्यशैली नोकरशाही छ, त्यसको असर पुरै सङ्गठनमा व्याप्त मात्रमा छ ।
महामन्त्री ज्यु, तपाइले वर्तमान परिस्थितिमा के गर्न हुन्छ अथवा हुन्न भन्ने चिजलाई नबुझेर होइन, नियतवस नै तपाइले पार्टीलाई नेकपा(सरकारि)मा विलय गराउने योजना अनुसार काम गर्नुभएको छ । यसमा पनि तपाईं आफू आजिवन यो पार्टी कै महामन्त्री भैरहने र त्यसपश्चात मोहन बिक्रम बाहेक अरुले पार्टी चलाउन सक्दैनन भन्ने बनाउन तपाइले यी सब काम गर्नुभएको हो भन्ने छर्लङ्ग छ ।
नियत गलत भयो भने मोहन जि, परिणाम कहिल्यै पनि सहि आउदैन । तपाइले पार्टीमा रअ को घुसपैठको सम्भावना देखाउनु हुन्छ तर त्यसको ठोस आधार कहिल्यै प्रस्तुत गर्नु हुन्न । रअ ले तपाइको पार्टीमा घुसपैठ गरेको छ भनेर सुचना दिने मान्छे तपाइको सम्पर्कमा चाहिँ कसरी आयो ? सुचना तपाइले प्राप्त गरेको हो भने तपाइको नै रअ सङ्ग कनेक्सन हुनुपर्दछ । यदि होइन भने विना आधार आरोप लगाउने अधिकार तपाइलाई छैन ।
आज तपाइको पार्टीमा अनुशासनविहिनता र अराजकताले पर्खाल नाघेको छ भन्ने प्रमाणहरु धेरै छन । जीवन शर्मालाई कारवाही गरेको विषयले सामाजिक सन्जालमा जुन हङ्गामा मच्चायो नि त्यो नै प्रमाण हो । पछिल्ला वर्षहरुमा तपाइले पार्टी हेडक्वाटरमा छानिछानी जुन कामरेडहरु नियुक्ति गर्नुभएको छ, जसलाई तपाइले अति विश्वास गर्नुभएको छ, तिनिहरुलाई अनुशासन र गोपनियता सम्बन्धी एउटा २ महिनाको प्रशिक्षण चलाउन आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय कार्यलयको नाममा तपाईंले गर्ने निर्णयहरु तपाइका विश्वास पात्रहरु बाहेक भन्दा बाहिर कहाँ बाट बाहिरिन्छ ? त्यो निश्चित रुपले तपाइका विश्वास पात्रहरुले बाहिर पठाउछन । राम्ररी बुझुहोस कि केही वर्ष पहिलासम्म तपाइको पार्टीमा यो प्रकारको अवस्था थिएन ।
तपाइका विश्वास पात्रहरुले कसरी-कसरी पार्टी हेडक्वाटरका गोपनियता र निर्णयहरु बाहिर लैजान्छन त्यसको प्रमाणको लागि मात्र एक दिन तिनिहरुलाई ब्लाइन्ड्ली वाच गरेर हेर्नुहोस । सडकका केही भट्टि पसलहरुमा समेत तपाइका पार्टीका निर्णयहरुको चर्चा सुन्न पाइने गरेको छ । पार्टी हेडक्वाटरमा रहने कमरेडहरु बढी जिम्मेवार र सम्वेदनशिल हुनुपर्ने हो तर तपाइका विश्वास पात्रहरु बजारमा चर्तिकला देखाउदै हिड्छन । अनि तपाइको पार्टीको निर्णय र गोपनियता कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ ?
मोहन जि, लाग्ला तपाइलाइ यो एउटा मान्छेले लुकिलुकी खुल्ला पत्र लेखेको छ । मैले तपाइको निजि इमेलमा पनि यि पत्रहरु पठाउन सक्थे । तर आज स्थिती यस्तो छ कि निजि इमेलमा पठाउदा न तपाइले यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ न तपाइका अति विश्वासिला कमरेडहरुले यो सुन्छन । म बाध्य छु यी पत्रहरु सार्वजनिक रुपमा लेख्न । पार्टी जिवनमा पार्टी अनुशासन र गोपनियताको महत्त्व र त्यसको कार्यान्वयनको कती भुमिका हुन्छ ? त्यो बारेमा म अनभिज्ञ छैन । त्यसो हुँदा हुँदै पनि म तपाइको पार्टीको एउटा सामान्य शुभचिन्तक भएकोले अहिलेको स्थितिमा तपाईं र तपाइका निर्जिव चेलाहरुको कर्तुतहरुको पर्दाफास गरिएन भने पार्टी भित्र मौलाएको व्यक्तीवादी अराजकतावादका विरुद्ध लड्न सकिनेछैन।
अन्तमा, मोहन जि , यो पत्रले अरु थप निरंतरता पाउनेछ, आशा गर्नुहोला । तपाइको पार्टी भित्र कम्युनिष्ट पार्टी, पार्टी अनुशासन र जनवादी केन्द्रीयताको नाममा ती चिजहरुलाई कति यान्त्रिक प्रकारले कार्यान्वयन गरिदै आएको छ, त्यसको सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्योसङ्गै तपाइको पार्टी भित्र तपाइका पार्टी नेताहरुले गरेको सबै गल्तीहरुलाई सप्रमाण सिलसिलेवार रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
उहीँ तपाइको पार्टीको पुर्व कार्यकर्ता
Posted in राजनीति, साहित्य